हिरो एक्सपल्स २०० र रोयल इन्फिल्ड हिमालयन : कुन कति दमदार ? | Automotive News Nepal
हिरो एक्सपल्स २०० र रोयल इन्फिल्ड हिमालयन : कुन कति दमदार ? ३१ बैशाख, २०७६
हिरो मोटोकर्पले हालै एड्भेन्चर मोटरसाइकल एक्सपल्स २०० लन्च गरेको छ । हिरोले एक्सपल्स २०० हल्का अफ रोड बाइक मन पराउने ग्राहकहरुलाई लक्ष्यित गरी उपलब्ध गराएको हो । सो बाइकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि रोयल इन्फिल्ड हिमालयन बजारमा उपलब्ध रहेको छ ।
ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी र हिरो राइड गाइड एपको साथमा आउने हिरो एक्सपल्स २०० अफरोड बाइकमा डिजिटल ड्यासबोर्ड रहेको छ । सो बाइकमा क्रोम बेजलको साथमा रेट्रो स्टाइल भएको एलईडी हेडल्याम्प उपलब्ध छ ।
हिमालयन साधारण र दमदार लुक भएको बाइक हो, जससको ड्यासबोर्डमा मोडर्न टच रहेको छ । स्पिडोमिटर, ट्रिपमिटर, फ्युल गेज, डायरेक्सनल कम्पस र अन्य जरुरी इन्फर्मेसन एनालग डायल र डिजिटल डिस्प्लेमा देख्न सकिन्छ । सो बाइकमा हेलोजन हेडल्याम्प उपलब्ध छ ।
एक्सपल्स २०० मा १९९.६ सीसी, एयर कुल्ड, सिंगल सिलिन्डर इन्जिन जडान गरिएको छ । सो इन्जिनले १८.४ पीएसको पावर र १७.१ एनएमको पिक टर्क जेनेरेट गर्छ । सो बाइक काब्र्युरेटर र फ्युल इन्जेक्सन अप्सनमा उपलब्ध रहेको छ ।
एक्सपल्स २०० को तुलनामा हिमालयनको इन्जिन दुई गुणा पावरफुल रहेको छ । हिमालयनमा ४११ सीसी, एयर कुल्ड, सिंगल सिलिन्डर इन्जिन रहेको छ जसले २४.८३ पीएसको पावर र ३२ एनएमको पिक टर्क जेनेरेट गर्छ । यी दुबै बाइकको इन्जिनमा ५ स्पिड गियरबक्स समावेश गरिएको छ ।
हिरो एक्सपल्स २०० को माइलेज ३६ देखि ४० किलोमिटर प्रति लिटर र हिमालयनको माइलेज २६ देखि २८ किलोमिटर प्रति लिटर रहेको कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
एक्सपल्स २०० मा १३ लिटर र रोयल इन्फिल्ड हिमालयनमा १५ लिटरको फ्युल ट्यांकी क्षमता रहेको छ । एक्सपल्स २०० को तौल १५४ किलोग्राम र हिमालयनको तौल १९१ किलोग्राम रहेको छ ।
हिमालयनको सिट ८०० एमएम र एक्सपल्स २०० बाइकको सिट ८२३ एमएम अग्लो रहेको छ । यसका कारण ५ फिट ५ इन्च भन्दा कम लम्बाई भएका राइडर्सलाई सो बाइक कन्फर्टेबल हुँदैन । दुबै बाइकको ग्राउण्ड क्लियरेन्स २२० एमएम रहेको छ । हिमालयनको ह्विलबेस १४६५ एमएम र एक्सपल्स २०० को ह्विलबेस १४१० एमएम रहेको छ ।
हिरो एक्सपल्समा डिस्क ब्रेक, सिंगल च्यानल एबीएस रहेको छ, जबकि हिमालयनमा डिस्क ब्रेक, ड्युअल च्यानल एबीएस उपलब्ध रहेको छ ।
हिरो एक्सपल्स २०० को शुरुवाती एक्स शोरुम मूल्य ९७ हजार भारु रहेको छ । हिमालयन बाइकको शुरुवाती एक्स शोरुम मूल्य १ लाख ८० हजार भारु रहेको छ ।
नेपाली बजारमा हिरो एक्सपल्स आउन बाँकी छ भने रोयल इन्फिल्ड हिमालयन पहिले देखि नै उपलब्ध छ ।
मारुती सुजुकीले ल्यायो फ्युचरो–ई कन्सेप्ट
मारुती सुजुकीले अटो एक्सपो २०२० मा फ्युचरो–ई कन्सेप्टको ग्लोबल डेब्यु गरेक...
काठमाडौंमा मोनो रेल निर्माण गर्न कस्सिए मुख्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चापलाई कम गर्ने उदेश्यले सञ्चालन गर्ने भनिएक...
वायुसेवा निगमले आन्तरिक गन्तव्य विस्तार गर्दै
काठमाडौं—नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले आन्तरिक उडानतर्फ थप गन्तव्य वि...